सञ्जय कहिले होटल काम गर्थे ! अहिले करोडौ मालिक -
सञ्जय कहिले होटल काम गर्थे ! अहिले करोडौ मालिक
२०७६, १० बैशाख मंगलवार ११:०६ April 23, 2019 clickonLeaveaComment on सञ्जय कहिले होटल काम गर्थे ! अहिले करोडौ मालिक
बलिउडमा स्टारडमलाई खुब महत्व दीइन्छ । कुनै स्टारले अनुहार देखाएकै भरमा नाफा दिलाउँछ भनेर निर्माताले दिल खोलेर लगानी गर्छन् । तर, बलिउडमै केही यस्ता कलाकार छन्, जसले आफ्नो अभिनयको बलमा स्टार हिरो–हिरोइनलाई समेत छायामा पारिदिन्छन् ।
यस्तै एउटा नाम हो, सञ्जय मिश्रा । सञ्जय बलिउडका चर्चित कमेडियन हुन् । तर, सञ्जयका लागि एक समय यस्तो थियो, उनी अभिनय क्षेत्र छाडेर ऋषिकेश गए र त्यहाँ एउटा होटेलमा काम गर्न थाले ।
यो समय उनको बाबुको मृत्यु भएको समय थियो । पिताको मृत्युपछि उनले अभिनय क्षेत्र नै छाडिदिए । अलि पछि घर नै छाडिदिए र ऋषिकेश गए । त्यतिवेलासम्म सञ्जयले सयभन्दा ज्यादा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका थिए । तर, उनलाई सफलता मिलेको थिएन ।यही कारण उनलाई रोटी–तरकारी बनाइने होटेलमा कसैले चिनेनन् ।
यदि निर्देशक रोहित सेट्टी थिएनन् भने सञ्जयको त्यसपछिका दिन पनि होटेलमै बित्ने थिए । रोहित र सञ्जयले फिल्म ‘गोलमाल’मा काम गरिसकेका थिए । रोहित ‘अल द बेस्ट’मा काम गरिरहेका थिए ।
त्यही कामको समयमा उनले सञ्जयलाई सम्झिए । सञ्जय भने फिल्ममा कमब्याक गर्न तयार थिएनन् । तर, रोहितले फिल्म खेल्नका लागि उनलाई राजी गराइछाडे । यसपछि भने सञ्जयले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन ।
उनले लगातार हिट फिल्ममा काम गरिरहेका छन् । अहिले सञ्जयको सम्पत्ति नै २० करोडभन्दा ज्यादा रहेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुबाट जिल्लाको पद अस्वीकार
अमिताभ बच्चनको नया चलचित्र “बदला” को ट्रेलर सार्बजनिक (ट्रेलर)
बिना लगन नै दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंह बिबाह बंधन मा बाधीए, कारण यस्तो रहेछ।
२०७५, २९ कार्तिक बिहीबार ०३:०१ November 15, 2018 clickon